BO Akkerbouw Anotarisa Pane Yakasimba Chain Nzira - Potatoes News
BO Akkerbouw anotarisa pane yakasimba cheni nzira
BO Akkerbouw, pamwe nemamwe mapato, vakatora chinetso ichi mugore reCorona 2020 kutsvaga mhinduro kumatambudziko akatarisana nebazi rekurima.
Izvi zvataurwa mune yeDigital Annual Report 2020 iyo BO Arable yekurima chikamu chikamu chinozoburitsa svondo rino. Sangano rinosimbisa kuti yakasimba cheni nzira haina kumbobvira yakakosha kupfuura mugore rapfuura. Chikamu chinogadziriswa hachina kungofanirwa kubata nemhedzisiro yakanangana nedambudziko rekona, matambudziko akatenderedza PFAS uye kutumbuka kwekudzivirira kwaidawo nzira inokurumidza uye yakakwana.
'Sezvakaratidzwa nguva nenguva, mhinduro dzinogoneka chete nekubatana kwakanaka muketani', anodaro André Hoogendijk, director weBo Akkerbouw. Mamiriro ekunze, ivhu, dziviriro yezvirimwa uye kusiyanisa kwezvinhu zvipenyu zvese zvinhu zvine chekuita nekanzuru iyi. Pamwe chete nenhengo dzedu uye neziso rekusiyana kukuru kwevarimi vanorimika, sangano reBo Arable rekurima rakaratidza gore rapfuura kuti rinogona kuita mushanduko. '
Kuwedzera kwe1 bhiriyoni kilos
Mumushumo wegore, BO Akkerbouw anotarisa kumashure, pakati pezvimwe zvinhu, pamhedzisiro yedambudziko rekona yemakambani embatatisi, anga achirwira neyakawandisa bhiriyoni bhiriyoni. BO Akkerbouw akaita kubvunzana muketani uye nebazi rezvekurima, zvisikwa uye chikafu chemhando. Izvi zvakazoguma zvaita chirongwa chekuripa chakakosha makumi mashanu emamiriyoni emauro mukati memazuva makumi mashanu. Pakupedzisira, varimi chiuru nemazana maviri vakaishandisa.
"Jaarverslag 2020: Volle kracht vooruit muitrendnd jaar"https://t.co/lcfJEdOzga pic.twitter.com/WGhxQjnD2z
- BO Akkerbouw (@boakkerbouw) June 14, 2021
Varimi vane mukurumbira vaifanira kubata nekurambidzwa kwekushandisa chlorpropham. BO Akkerbouw, pamwe nenhengo dzakabatanidzwa, vakaziva chidimbu cheMaximum Residue Limit (MRL) ine Taskforce Germ Kuderedza. Kutaurirana kwakanaka muketani kwakavimbisa iyi nzira inobudirira. Izvi zvinoshanda kune varimi vembatatisi.
Dambudziko rePFAS rakamuka pakupera kwe2019 rakabata cheni yese yekurima. SANGO rekurima chikamu cheArable chakatungamira, semhedzisiro iyo muyero wakawedzerwa mumatanho maviri muna 2020. Izvi zvinopa chikamu chakaringana nzvimbo yekudzorera ivhu rakasviba kuminda.
Makumi mana emupiro wekurima wekurima
BO Akkerbouw akaisa mari inosvika 1.9 mamirioni euros muzvirongwa zvina zvitsva. Kutenda kune zvipo zvinobva kune mamwe mapato uye zvakapetwa nevakuru chikamu, huwandu hwakazara hwemapurojekiti hunopfuura mamirioni masere euros. Kuwedzera kanopfuura kana mumupiro wevarimi vanorima.
Chekupedzisira, BO Arable yekurima chikamu chesangano inoshuma kuti NAJK yanga iri nhengo yepamutemo kubva muna Gumiguru. Izvi zvinopa sangano revechidiki chinzvimbo chakazara mumusangano mukuru wenhengo nebhodhi. Nhengo dzeBo Akkerbouw ikozvino Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Iyo Komiti yeGrain Traders, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen naVavi.
BHOKO Arable kurima
BO Akkerbouw isangano rebazi reDutch arable kurima. Chikamu chesangano chine chishuwo chekuve wepakati chikuva uye ruzivo nzvimbo yemaketeni ekurima ekurima (verengawo yedu kuona ). Sangano rinopa izwi rimwe rine simba rekurima kweDutch kurima, inosimudzira zvishuwo zvechikamu ichi uye inouya nemhinduro dzezvinhu zvakabatana. Mbiru:
A Tsvagiridzo uye chirongwa cheInnovation iyo inotarisa kune chikamu-chakapfuura tsvagurudzo misoro Kuongorororwa kwemapurojekiti aripo anogona kuwanikwa mu bhurocha "Zvirongwa 2020" .
sununguka musika uye ruzivo rwemutengo
Kufambisa iyo Arable Kurima Certification Kubvunzana, inova maneja weKudya uye Kudya Kwekuchengetedza Kwekurima Kurima ( VVAK ) chirongwa.
Kusimbisa mufananidzo wekurima nekumisa zviitiko zvine chekuita nekutaurirana kwenzvimbo: Vhiki rekurima.
Kuitwa kwe sekiritariat uye nemitemo mabasa kune vanobatsirana muketani yekurima inorimwa.
BO Akkerbouw ine bhodhi uye zvikamu zvakasiyana uye nemapoka anoshanda kuti aone zvishuwo zvaro. Wona kuumbwa kwenhengo dzakasiyana uye uverenge rumwe ruzivo.
BO Akkerbouw zet mune imwe sterke ketenaanpak
Downloads: Mushumo Wegore Negore-2020
Tags: muripoDutchmusika wembatatisichikamu chembatatisi
Maketani emapati ane chekuita nekugadzirisa kubiridzira kwembatatisi yembeu
Mumwe muvarimi vaviri vanorima anodiridza mushure memakore matatu aoma
Mitengo yefetiraiza iri kubvisa muhomwe dzevarimi
Rabobank: 'Kuisa mvura pamoyo pekuita bhizinesi'
"Goho pahekita gore rino rakakosha mukugadzirwa kwembatatisi"
Mbatatisi mu2020 - mhando mune yakaoma mamiriro
PEF Kurapa Mbatatisi inoita Preheater muFrench Fry Line isashande